Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 65aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 65aad
Waa Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl kala soco Jimco walba Jowhar.com
Qadar maalmihiisa macaanaa ee jaceylka xoogan ee uu u qaaday Samiira ayuu ku jiray waxaase markaan farxadii ka jiirtay safar lama filaan ah oo ku soo baxay oo uu aabahiis ku amray in mudo bil ah uu tago.
Xafiiska ganacsiga ee uu aabahuus ku lahaa dalka Emiratka carab magaalada Dubey Qadar hadalka aabahiis waxa uu ahaa mid uusan diidi Karin si cagajiid ah ayaa uu ku aqbalay.
Qadar aqbaartaan uusan jecleysan ayuu go’aansaday inuu Samiira la wadaago waxa uu ugu tagay xaafadeeda markii uu tagay ayay markiiba Samiira ku tiri.
Qadar jaceylka miyaad xamili la’ dahay kulankaan aad codsaday ma fahmin maxaad ii sheegi rabtaa ileyn kulanadeeda rasmiga caawa kama mid aha.
Macaanto waxaan soo maray xilli sidii howtul hamigii oo kale aan u noolaa waqtiga qiimo ma uusan ii laheyn laakiin hadda nafteyda ma dooneyso in ay kaa fogaado.
Maxaa I kaa fogeyn kara ii sheeg sow ma ogid in jaaceylka iyo dareenkaba aan kaaga horeeyey oo aan si xad dhaaf ah aan kuu jeclahay.
Waan ogahay balse waxaan diidan nahay in aan malin gelinkeed xataa aan ku moogaado
Sina uma kala tagno ee ii sheeg maxaa soo kordhay waan kaa dareemayaa in arrin aan ku farxad gelin ay jirtee.
Safar ayaa ii soo baxay oo waliba mudo bil ah
Halkee ayaad tageysaa
Arrimo ganacsi miyaa
Haa xisaabaha Dubey ayaa aadayaa oo aan soo fiirinaa ma og tahay safarada sidaan oo kale aniga Ayaan dalban jiray laakiin manta markii uu Aabe ii sheegay kuma aan farxin.
Macaane mid ogow manta dunida waa meel yar oo kooban meel kasta oo aad aado waan is maqli karnaa waliba is arki karnaa maxaad la murgooneysaa waa 30 cisho oo kaliya.
Aniga nimuu dareenka jaceylka ku cusub yahay Ayaan ahay waliba waa igu sii labo lixaadsaday.
Daawadiisa sow aniga maaha xilli kasta Ayaan joogaa mar alle markaan qalbiga kaa soo galo kaliya I soo wac waa intaas aniga ayaa Paractamol kuu ah.
Ma filayo in aan xamili karo macaanto
Hadaan kaa dhinto side ku noolaan laheyd
Waa ku baryaa sidaa ha dhihin afka uma roona dhimashada ha soo qaadin nolol macaan oo ubax ah ayaa na sugeyso kaliya qeyrka noo rajey.
Inshah Allah qeyrka waa inuu dambeeyaa
Qadar habeen waqti badan ayaa uu la qaaday maadaame uu beri dambe uu baxayo sidoo kale ayaa uu Aabe Mumin iyo Hooyo Farxiya u sheegay inuu safar tagayo halkii Ayaana la isku macasalaameey isaga iyo Samiira ku balameen in telka ay iskala soccon doonaa.
Qadar wallow uu jeclaa in Samiira ay a mid noqoto dadka ilaa Airporka u raacayo hadana ma dhicin maadaama ay Samiira maalmahaas ay u bilaabaneysay imtixaanaadka Jaamacada wallow ay telefoonka si toos ugu jirtay ilaa ay diyaarada hawada gasho.
Waa Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl kala soco Jimco walba Jowhar.com una gaar ah jowhar.com waxaana ku soo fara yareeystay qoraga reer jowhar Haalkoos xaalkoos@hotmail.com
Previous articleGuddoomiye Mursal “Wixii qalad ee ku saabsan qabashadii Mukhtaar Roobow waa lagula xisaabtamaya cida leh”
Next articleXildhibaan ka tirsan Koofur Galbeed oo lagu dilay Baydhabo iyo Rabshado wali ka socda magaalada